musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Cebu Pacific vashandi vanobhururuka zvino 100% vabayiwa zvizere
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • nhau • vanhu • Philippines Kupwanya Nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Cebu Pacific vashandi vanobhururuka ikozvino 100% vajekiserwa.
CEB inopemberera chiitiko ichi sezvakarongwa, uye nenguva yekuwedzera kunotarisirwa kwevafambi mumwedzi iri kuuya, zvichitevera kurerutswa kwezvirambidzo zvekufamba muPhilippines.
Chirongwa cheCOVID Protect chikamu chechirongwa cheGokongwei Group kune ese mabhizinesi emayuniti.
Vese vashandi veCebu Pacific vave nechikamu che98 muzana vabayiwa zvizere.
Cebu Pacific yakawana 7-nyeredzi kuchengetedza chiyero kubva kuairlineratings.com nekuda kweCOVID-19 kutevedzera.
Ndege huru yePhilippines, Cebu pacific, yawana chiyero chekudzivirira chegumi muzana chevashandi vayo vanobhururuka kuburikidza nechirongwa chayo chekudzivirira vashandi, COVID Dziviriro, uye kudyidzana kwakasiyana neLGUs munyika.
“Tinofara zvikuru kugovera nhau idzi kumunhu wese apo tiri kugadzirira kugadzirisa network yedu yepamba kuti ienderane nezvinodiwa zvekufamba. Cebu pacific inoenderera mberi nekusimudzira mapuroteni ayo ekuchengetedza uye tinoziva kuve nevashandi vakabayiwa zvizere kuchasimbisa kuvimba uye chivimbo cheveruzhinji mukufamba nendege, "akadaro Felix Lopez, Mutevedzeri weMutungamiri weDhipatimendi reVanhu. Cebu pacific.
Iyo COVID Dziviriro chirongwa chikamu cheiyo Gokongwei Group's initiative kune ese mabhizinesi mayuniti. Kuburikidza neizvi, vashandi veCEB vakagamuchira inoculation yemahara ivo nevanovavimba, pamwe nevashandi vebato rechitatu, senge vamiririri vekutarisa uye vanobata mabhegi.
Kunze kwechirongwa ichi chinotungamirwa nemubatanidzwa, CEB yakashandawo maoko nemapazi akasiyana ehurumende dzematunhu mwedzi yadarika kuona kuti vashandi vayo vabaiwa nejekiseni riripo, nekukasika.
“Tinorumbidza vatyairi vendege nevashandi vedu nekuzvidira kubaiwa nhomba, kwete kuzvidzivirira ivo nemhuri dzavo chete, asi kunyangwe vakwiri vavanobhururuka navo. Tinotaurawo kutenda kwedu kuvatungamiri vedu pa Gokongwei Group kutungamira chirongwa chekudzivirira, uye chokwadi, vatinoshanda navo vehurumende nekuona chikamu chezvekufambisa seboka rekutanga," akadaro Capt. Sam Avila, Mutevedzeri weMutungamiri weFlight Operations kuCebu Pacific.
Vese vashandi veCebu Pacific vava 98% vabayiwa zvizere. Semufambisi wekutanga wendege muchirongwa cheIngat-Angat, uye semutsigiri mukuru mukuvaka nyika, CEB yanga ichishingairira kutakura majekiseni kubva kunze kwenyika kuenda kuPhilippines, uye nenyika yese kubva munaKurume gore rino. Kusvika pari zvino, nhandare yendege yakaendesa zvakachengeteka mishonga yekudzivirira yekudzivirira miriyoni gumi nematanhatu kubva kuChina ichienda kuPhilippines, uye inosvika mamirioni makumi maviri neshanu emadhora munzvimbo makumi maviri nemasere ekuenda.
CEB yakawana 7-nyeredzi kuchengetedza chiyero kubva kuairlineratings.com nekuda kwayo COVID-19 kutevedzera. Inoenderera mberi nekushandisa nzira ine mativi akawanda ekuchengetedza sezvo ichiedza kudzoreredza kuvimba kweveruzhinji mukufamba nendege.
CEB inoshanda yakakura kwazvo mudzimba network muPhilippine inobata nzvimbo makumi matatu nembiri, pamusoro penzvimbo dzayo sere (32) dzepasirese. Zvikepe zvaro zve8-zvakasimba, imwe yediki pasi rose, inosanganisira mbiri (73) yakatsaurwa yeATR yekutakura uye imwe (2) A1 inotakura zvinhu.